WAR DEG DEG AH-Axmed Karaash oo Goor Dhoweyd Isugu Yeeray Golaha Wasiirada & Puntland oo War Ka Soo Saaraysa G Sanaag.
May 23, 2019 puntlandnews Puntland, Wararka Maanta 0
Puntlandnews.net (Garoowe)-Madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa goor dhoweyd oo saaka ah isugu yeeray xubnaha golaha wasiirada Puntland ee ku sugan magaalada caasiamdda ah ee Garoowe.
Axmed Cilmi Cismaan (Karaash) ayaa shir guddoominaya shirka golaha wasiirada oo intiisa badan diiradda lagu saarayo ammaanka Puntland, xiisadaha ka soo cusboonaaday gobolka Sanaag, imtixaanka shahaadiga ah ee Puntland oo maanta soo xirmaya iyo arrimaha dibadda.
Kulanka waxaa warbixin looga dhegaysan doonaa xubno uu kamid yahay wasiirka waxbarasahda Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan oo xilli uu kormeer kujirey ay Somaliland isku xabadeeyeen deegaamo kuyaal duleedka Ceerigaabo.
Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Denni iyo xubno katirsan golaha xukuumadda ayaa safar ku jooga magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Wixii warar ah ee ka soo kordha kala soco warbaahinta Puntlandnews